Vanorima michero nyoresai: ama
You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Vanorima michero nyoresai: ama
By Muchaneta Chimuka on	 November 24, 2017 · NHAU DZEVARIMI
SANGANO reAgricultural Marketing Authority (AMA) rinoti rine hurongwa hwekunyoresa varimi vakazvimiririra nemakambani anorima michero, maruva nezvimwe (horticulture products) mumwaka uno nechinangwa chekusimudzira indasitiri iyi.
Mumagwaro ayo, AMA inoti makambani ese nevarimi vanoda kutenga kana kurima michero nemaruva vanofanira kutanga vanyoresa vasati vapinda mubhizinesi iri.
AMA inoti varimi vemichero nemakambani emaruva vanofanira kunyoresa kuburikidza nesangano ravo kuitira kuti vange vachiiswa mumagwaro (grower’s data base).
“Zvikwata zvevanhu vanofanira kunyoresa zvinosanganisira varimi vakuru vanoita zvekutengesa, vatengesi vadiki nevari pakati nepakati avo vanokwaniswa kurima zvirimwa zvenhando iyi zvinosvika matani 100 pamwedzi,” inodaro AMA.
Sangano iri rinoti varimi vanoda kunyoresa vanofanira kuenda kunotora mafomu avo kumahofisi eAMA ari kuMount Pleasant muguta reHarare.
Makambani ese nevarimi vakazvimiririra avo vane shungu nechido chekurima maruva nemichero vanofanira kunyoresa zvichifambirana nemutemo weAgricultural Marketing Authority Act CAP 18:24 pamwe neStatutory Instrument 147 of 2012.
Mutemo uyu unobatsira zvikuru mukutsigira kana kusimudzira varimi vanorima nenzira yemakondirakiti – vangava vezvirimwa kana zvipfuyo vachitsigirwa nemari uye ruzivo.
AMA ine basa guru rekuona pamusoro pekutengeswa nekuvandudzwa kwezvirimwa zvose zvichigadziriswa zvinhu zvakasiyana.